Jacaylku ma yaqaan xuduudaha Archive - Xuquuqda Aadanaha & farshaxanka fudud ∴ PixelHELPER Foundation
Jacaylku ogyahay xuduud la'aan
25 2013 karaa
Laga soo bilaabo qaanso roobaad - farshaxan fudud oo isku xira buundooyinka
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 25. May 2013
Sawiradu waa ficil isu dheellitiran qaansoroobaad.
"Laga soo bilaabo qaanso roobaadka"
Iftiin aan caadi ahayn oo ka mid ah xayawaan qoryo sabeynaya Sabtida Sabtida ka timid magaalada Dusseldorf ee magaalada.
Ololaha “Ka socda Rainbow” PixelHELPER waxay u taagan tahay dulqaad badan iyo nacayb.
Qaanso roobaadka wuxuu astaan ​​u yahay rajo & kaamilnimo. Markasta oo dadku arkaan qaansoroobaad, hal shay ayaa hubaal ah: mugdiga iyo roobku ma laha eraygii ugu dambeeyay.
Mashruuca farshaxanka fudud “From Rainbow” ee Oliver Bienkowski waa mashruuc socda kaas oo buundooyin caan ah, dhismayaal iyo qaab dhismeedka magaalooyinka loo beddelayo waxa loogu yeero buundooyinka qaansoroobaad. Ilaa hadda, ka sokow buundada dekedda ee Medienhafen ee Düsseldorf, buundada Karl Branner ee Kassel ayaa sidoo kale dib loo qaabeeyey. Mashruucani wuxuu dadka ku kala qaybiyey Documenta wuxuuna horumar xoog leh ku yeeshay martida farshaxanka caalamiga ah. Iridda Brandenburg sidoo kale waxaa loo beddelay qaanso roobaad loogu talagalay Iidda Iftiinka. Caanka caanka ah ee Kassel Mountain Park Kaskaden, oo qayb ka ah UNESCO World Heritage Site, ayaa sidoo kale lagu xardhay qaanso roobaad. Farshaxankan ayaa ku doodaya dulqaad badan & nacayb nacayb.
Laga soo bilaabo qaanso roobaad - farshaxan fudud oo isku xira buundooyinka May 6th, 2020Oliver Bienkowski